Nhoroondo yeIndonesia | Mamwe Mamishinari, Uye Kubhanwa kweZvapupu
Musi wa9 July 1964, Dhipatimendi Rezvemitemo remuIndonesia rakanyoresa zviri pamutemo Bible Students Association, sangano repamutemo raishandiswa neZvapupu zvaJehovha. Asi hama dzaifanira kunyoresawo kuDhipatimendi Rinoona Nezvezvitendero kuti dzizokwanisa kunamata dzakanyatsosununguka. Dhipatimendi iri rakateerera zvarakaudzwa nebazi reDirectorate General of Christian Community Guidance, iro raiumbwa nevanhu vainge vakaoma musoro, vemachechi akabuda muRoma, avo vaipikisa chaizvo Zvapupu zvaJehovha.
Rimwe zuva imwe hama yakaonana nemukuru mukuru aishanda neGurukota Rinoona Nezvezvitendero. Hama iyi nemukuru mukuru uyu vakatozoziva kuti vaibva kumusha kumwe chete, saka nyaya dzakatozotanga kutsva vachishandisa mutauro wavakakura vachitaura. Hama iyi payakataura nezvekusawirirana kwavo nebazi reDirectorate General of Christian Community Guidance, mukuru mukuru wacho akabva aronga kuti hama nhatu dzionane negurukota riya raaishanda naro. Gurukota racho raiva muMuslim uye raiva munhu ane ushamwari uye anonzwisisa. Musi wa11 May 1968, gurukota racho rakazivisa kuti Zvapupu zvaJehovha chitendero chiri pamutemo uye zvine kodzero yekuita basa rekuparidza muIndonesia.
Mukuru wacho akati aida kushandisa masimba ake, orega kuenda kubazi reDirectorate General of Christian Community Guidance kuitira kuti Zvapupu zvokune dzimwe nyika zvikwanise kuwana mavhiza ekupinda munyika kuti zvishande semamishinari. Achibatsirwa nemukuru mukuru iyeye ainzwisisa, mamishinari 64 akakwanisa kupinda muIndonesia mumakore mashoma akatevera.
Pakazosvika 1968, mamishinari nemapiyona chaiwo anenge 300 uye vaparidzi vanopfuura 1 200 vakanga vava kuparidza mashoko akanaka muIndonesia yese. Mamishinari akadzidzisa hama nehanzvadzi dzeko maitirwo ebasa. Izvi zvakaita kuti dzikurumidze kufambira mberi pakunamata. Kudzidziswa uku kwakadzibatsira chaizvo nekuti zvaiitika zvairatidza kuti paisazombopera nguva dzisati dzatanga kutambudzwa.
Vafundisi Vanowana “Chipo cheKrisimasi”
Muna 1974, bazi reDirectorate General of Christian Community Guidance rakamutsidzira nyaya yarakanga rabva nayo kure yekuti Zvapupu zvaJehovha zvibhanwe. Mutungamiriri webazi racho akanyorera mahofisi ese emunyika yacho eDhipatimendi Rinoona Nezvezvitendero, achinyepa kuti Zvapupu zvaJehovha zvakanga zvisina kunyoreswa zviri pamutemo. Akanyora achiudza vakuru vakuru vekumahofisi acho kuti vatsvake tuzvikonzero twekuti vatambudze vanhu vaJehovha. Vakawanda vavo havana kuteerera zvaakataura. Asi vamwe vakatoshandisa mukana wacho kuti vabhane misangano yechiKristu uye basa rekuparidza paimba neimba.
Musi wa24 December, 1976, rimwe bepanhau rakazivisa kuti Zvapupu zvaJehovha zvakanga zvabhanwa
Panguva imwe chete iyoyo, sangano reWorld Council of Churches (WCC) raironga kuva nemusangano wenyika dzakawanda muJakarta, asi maMuslim emunyika yacho akaona sekuti kwakanga kuri kudenha. Sezvo kusawirirana kwezvitendero kwairamba kuchikura, sangano reWCC rakazokanzura musangano wacho. Zvisinei, nyaya yekutendeutsira vanhu kuchiKristu yakanga yava kunetsa, uye vakawanda vezvematongerwo enyika vakatanga kutya. Hazvina kutishamisa kuti vafundisi vakabva vatanga kupa Zvapupu zvaJehovha mhosva vachishora zvakasimba basa razvo rekuparidza. Izvozvo zvakatoita kuti vamwe vakuru vakuru vaone Zvapupu neziso risina kunaka.
Muna December 1975, nyaya yekusawirirana kwezvitendero payairamba ichikora muto, Indonesia yakapinda nechisimba muEast Timor (yava kunzi Timor-Leste), iyo yaimbova pasi pePortugal. Pashure pemwedzi 7, East Timor yakatorwa neIndonesia, zvichibva zvaita kuti vanhu vade chaizvo kutsigira nyika yavo. Hama dzakaramba dzisina kwadzakarerekera mune zvematongerwo enyika uye dzakaramba kupinda muchiuto nekusaruta mureza. Izvi zvakamutsa hasha dzevakuru vakuru vemauto. (Mat. 4:10; Joh. 18:36) Vafundisi vakabva vati dzawira mutswanda, saka vakatanga kunyunyuta kuhurumende kuti ione zvokuita neZvapupu. Nechepakati paDecember 1976, vafundisi vakazowana “chipo cheKrisimasi,” hurumende payakazivisa kuti Zvapupu zvaJehovha zvabhanwa.
Indonesia: Mamwe Mamishinari Anosvika